Na mgbakwunye na ihe ọhụrụ na ndozi ahụhụ, Emeziwo nsogbu 31, nke nke iri na anọ ka akara akara dị ka nsogbu dị egwu 14 (nke a chịkọtara maka CVE-12-2020 na CVE-26969-2020) kpatara nsogbu nchekwa dị ka ebe nchekwa na ohere ịbanye na ebe nchekwa echetarala.
Nsogbu ndị a nwere ike ibute mmebi nke koodu ọjọọ mgbe ị mepee peeji ndị emebere.
1 Main atụmatụ ọhụrụ nke Firefox 83
2 Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 83 ọhụrụ na Linux?
Main atụmatụ ọhụrụ nke Firefox 83
Site na ndabara, na alaka ụlọ ọrụ ọhụrụ a nke Firefox 83 nyere JIT compiler ohuru, nke mepụtara n'okpuru aha aha Warp, nke ga-eme ka usoro JIT dị mfe, meziwanye nzaghachi, belata oge nbudata peeji, ma belata oriri nchekwa.
Na ngalaba "Nzuzo na nchekwa" na ntọala, a na-enye ọnọdụ "HTTPS naanị"Mgbe enyere ya aka, arịrịọ niile emere na-enweghị izo ya ezo na-ebute ya na peeji nke echekwara echekwa. Enwere ike ịme ọnọdụ a maka windo niile ma ọ bụ naanị windo mepere na ọnọdụ nchọgharị nkeonwe.
Ọzọkwa, arụ ọrụ nkwenye weebụ ọhụrụ arụ ọrụ ọ naghị egbochi taabụ ndị ọzọ. Dị maka ịbanye ntinye ntinye ugbu a jikọtara na taabụ a kapịrị ọnụ ma ghara igbochi interface niile.
Gbakwunyere igodo ọkụ iji weghachi ngwa ngwa vidio gosipụtara na ọnọdụ foto na foto. Laghachi azụ na azụ na 15 nke abụọ increments, ọ bụ ugbu a zuru ezu pịa kwekọrọ cursor igodo.
E meziwanye interface ahụ egosipụta mgbe ị gbanyere nkekọrịta ihuenyo n'oge ogbako vidiyo na Firefox. The interface ugbu a ọzọ doro anya banyere nke ngwaọrụ na ihuenyo na-akọrọ.
Ogwe adreesị nwere ikike ịgbanwe ngwa ngwa na injin ọzọ Chọọ: A na-egosipụta ndepụta nke akara ngosi engine dị ugbu a na ala nke windo ahụ ọbụna tupu mmalite nke ajụjụ (na mbụ, ndepụta ahụ gosipụtara naanị mgbe abanyechara leta mbụ nke ajụjụ ahụ).
Ọzọkwa, ọrụ "Tab-na-search" dị, nke na-enye ohere ịpị igodo ahụ Taabụ na nkwụsị mmanya ntụgharị gaa na ọnọdụ ọchụchọ na nhọrọ nchọnchọ ọchụchọ na-arụsi ọrụ ike dabere na ihe odide ndị abanye, ọ bụrụ na otu n'ime engines ọchụchọ arụnyere bụ nke na-enye autocomplete. Dịka ọmụmaatụ, ịpị "ya" ga-alaghachi "yandex.ru", emesịa ị nwere ike pịa Tab na ọnọdụ nke ide ajụjụ na Yandex ga-enyere aka.
Emeela interface interface PDF eji arụ ọrụ (Ihe nnọchianya edochila anya ya, ejirila ọkụ mee ihe maka ogwe ngwaọrụ).
Maka ngwaọrụ Apple tinyere na macOS Big Sur ma kwadoro Apple CPUs ọhụrụ, ike iji Firefox nyere site na onye ntụgharị okwu Rosetta 2 ọnụọgụ abụọ. Na mbipụta ndị na-esote, a na-ezube inye mgbakọ nke ala maka Apple M1 CPU. Macdị macOS na-enyekwa obere mgbake windo iwelata iji belata ike oriri.
N'ihi na Windows 7/8 / 8.1 na macOS 10.12-10.15 ọrụ, na WebRender compositing engine na-nyeere. Yabụ, enyere WebRender aka ugbu a maka ụdị Windows na macOS niile (belụsọ 10.16 Beta).
Maka Linux, ndị ọkwọ ụgbọala NVIDIA ka nọ na ndepụta ndepụta maka WebRender, yana ndị ọkwọ ụgbọ ala Intel mgbe ị na-eji mkpebi ihuenyo nke 3440 × 1440 na karịa.
Ndị ọrụ nke ọkwọ ụgbọala ọnụọgụ abụọ nke NVIDIA na Linux ndị ji aka ha rụọ ọrụ WebRender ma ghara iji ihe mejupụtara nwere ike ịlaghachi azụ, ebe ọkara nke ihuenyo ahụ na-aghọ rectangle jupụtara.
Enwere ike idozi nsogbu ahụ site na itinye ihe mejupụtara ma ọ bụ site na mbupụ nke ọ bụla n'ime mgbanwe ndị a na-esonụ: MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION = sistemụ (ọ dị mwute ịgụnye aha windo) ma ọ bụ MOZ_X11_EGL = 1 (nhọrọ a na-egbochi nkwado maka WebGL 2). I nwekwara ike iwepu WebRender nwa oge.
Kedu otu esi etinye ụdị Firefox 83 ọhụrụ na Linux?
GNUnet 0.14 biara na ngwa izipu ozi na ndi ozo